Garbati sy ny Medusa miaraka amin'ny lohan'i Perseus eo an-tànany | Famoronana an-tserasera
Voalohany ity sary sokitra Medusa mitondra ny lohan'i Perseus eny an-tànany, ankoatry ny famoronana karazana adihevitra isan-karazany noho ny toerana misy azy dia io no ohatra faratampony amin'ny fitsaboana ny vatan'ny vehivavy mitanjaka amin'ny kanto.
Afaka andro vitsivitsy toerana iadiana ny fanaovana firaisana amin'ny vatan'ny vehivavy, Ity sanganasa ity dia manazava mazava tsara fa toy inona ny vatan'ny vehivavy mitanjaka amin'ny sary sokitra natsangana tsara tarehy ary miaraka amin'ny hafatra tsy dia miharihary.
Ny asymmetran'ny ny endriny, ny halavany ary ny maha-izy azy, ary ny hafatra entiny mamadika ny angano grika momba ny Medusa, dia hita eo amin'ny manodidina ny fitsarana ao Manhattan; toerana i Harvey Weinstein mpamokatra no miatrika ny fahamarinana ary nanosika ny #metoo.
Mitondra ny lohateny hoe Medusa Miaraka amin'ny Head of Perseus, sary vongana varahina 7 metatra Mampiavaka azy io volo feno bibilava io, ny sabatra amin'ny tànany iray ary ny lohan'i Perseus amin'ny iray hafa.
Un asa nataon'i Luciano Garbati tamin'ny 2008, notanterahina tamin'ny aingam-panahin'ny sary sokitra nataon'i Benvenuto Cellini an'ny Perseus miaraka amin'ny lohan'i Medusa (1545-1554). Ireo sanganasa roa ireo dia mifototra amin'ny angano grika an'ny Metamorphosis an'i Ovid, tononkalo 15-boky izay milaza ny tantaran'izao tontolo izao hatramin'ny namoronana azy ka hatramin'ny fanamasinana an'i Julius Caesar.
Raha ny marina, ny Nanjary nalaza tamin'ny sarivongan'i #metoo tamin'ny taona 2018 ny sarivongana Garbati mampiharihary ny heloka ara-nofo nataon'ny mpamokatra sarimihetsika Weinstein. Ary tamin'ity taona 2018 ity, sary iray an'ny asan'i Garbati no miely amin'ny tambajotra sosialy miaraka amin'ny soratra hoe "Misaora fa ny fitoviana ihany no tadiavinay fa tsy ny valifaty."
Una asa izay manenika ny realista amin'ny endriny ary izany no fomba tsara indrindra hanehoana ny tena vatan'ny vehivavy. Avelanay miaraka amin'ny sary sokitra louvre tsy misy sandry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny resabe sy ny zava-misy amin'ny sary sokitra Medusa izay tsy anaovan'ny vehivavy firaisana ara-nofo ny vatana vehivavy